Oppo Find X ရဲ့ Display တွေ စွန်းမိုက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းက?? – DigitalTimes
Mobiles & Tablets NEWS Oppo
Samsung က OPPO Find X စမတ်ဖုန်းတွေမှာ သူ့ရဲ့ Y-OCTA display တွေထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ ETNews က ဆိုထားပါတယ်။ တကယ်သာမှန်ရင်တော့ Samsung အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ဖုန်းမဟုတ်တဲ့ တခြား Flagship ဖုန်းမှာ Y-OCTA Display တွေကို ပထမဆုံးသုံးပေးလိုက်ခြင်းပါပဲ။
Samsung ရဲ့ Y-OCTA Display တွေကို ပထမဆုံးသုံးလိုက်တဲ့ဖုန်းက Galaxy Note7ဖုန်းတွေပါ။ အဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီး Galaxy S8, S9 နဲ့ S9 Plus တွေမှာဆက်သုံးခဲ့ပေမယ့် Galaxy S8 Plus နဲ့ Note 8 တွေမှာတော့ မသုံးထားပါဘူး။
Y-OCTA display တွေမှာက Display အလွှာမှာကို Touch layer ထည့်သွင်းထားပြီးသားဖြစ်လို့ Touch Screen Panel သက်သက်ထပ်ထည့်စရာမလိုပါဘူး။ သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ အရင် Display တွေထက် ပိုပါးလွှာ ပိုပေါ့ပါးပြီး ပိုလည်းဈေးသက်သာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြိုင်ဘက်ကင်းအောင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမတ်ဖုန်းတွေအတွက်ပဲသုံးလာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ETNews ကဆိုထားပါတယ်။
ကိုယ့်ဖုန်းတွေအတွက်ပဲသုံးရင်းက ဘာလို့တခြားကိုရောင်းချသလဲဆိုတာကတော့ iPhone X ရောင်းအားတွေကျလာလို့ Apple က OLED panel မှာယူမှုလျှော့ချလိုက်လို့ တခြားဈေးကွက်ရှာတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား??
ဘယ်လိုပဲနေနေ Oppo Find X ကတော့ 6.42 inch Y-OCTA Display နဲ့ တော်တော်မိုက်နေပါတယ်။ ဘေးဘောင်တွေကို ခုံးထားတာကလည်း မကြာသေးခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Samsung Flagship ဖုန်းတွေလိုပါပဲ။ Screen-to-body ratio က ရှိပြီးသား Samsung ဖုန်းတွေထက်တောင် ပိုများတဲ့ 93.8% နဲ့ထုတ်ထားတာပါ။
Samsung အနေနဲ့လည်း နောက်နှစ်ထွက်မယ့် Galaxy S10 Plus တွေမှာ Oppo Find X ရဲ့ Display အရွယ်အစားအတိုင်းသုံးသွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ Oppo Find X မှာတောင် ဒီလောက်စွန်းမိုက်နေရင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စမတ်ဖုန်းမှာဆို ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့အရမ်းကောင်းနေပါပြီ။